ကိုဗစ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားပြီး သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကိုပြန်လည် ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် ဘင်ဂျမင် – Cele Oscar
ကိုဗစ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားပြီး သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကိုပြန်လည် ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် ဘင်ဂျမင်
ပရိသတျကွီး ရေ Myanmar Idol season (4) ရဲ့ Top (3) finalists တဈယောကျ ဖွဈတဲ့ ခငျြး တိုငျးရငျးသားလေး အဆိုတျော ဘငျဂမြငျ ကို သိကွမယျထငျပါတယျ။ သူက ငယျရှယျ တဲ့ ကြောငျးသား တဈယောကျ ဖွဈပမေယျ့ အရှယျနဲ့ မလိုကျအောငျ အနုပညာ အရညျ အခငျြး ပွညျ့ဝ တဲ့ သူဖွဈတဲ့ အတှကျ ပရိသတျအမြားစု ရဲ့ အားပေး ဝနျးရံမှု ရရှိ ထားတဲ့ သူတဈ ယောကျပါ။
ဘငျဂမြငျ က အခု လကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေး အခွအေနတှေေ မှာ လညျး လူငယျ တဈယောကျ ပီပီ ပါဝငျ အားဖွညျ့နေ တဲ့ သူလညျး ဖွဈပွီး စဈဘေးရှောငျပွညျသူတှေ အတှကျ တတျနိုငျသရှေ့ ကူညီပေးနတေဲ့ သူပါ။ မကွာခငျက ဘငျဂမြငျ ဟာ ကိုဗဈ ရောဂါပိုး ကူးစကျခံ ခဲ့ရပွီး ဆေး ကုသမှု ခံယူခဲ့တာ လညျးဖွဈပါတယျ ။ ကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျ ခံရပွီး (၁၄) ရကျမွောကျ နမှေ့ာတော့ ရောဂါရှိ မရှိပွနျလညျ စဈဆေးကွညျ့ရာ negative ဖွဈကွောငျး သိရှိ ရပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ ကိုဗဈ ရောဂါ ကုသနစေဉျ ကာလ တဈလြှောကျ သူရဲ့ အတှအေ့ကွုံ တှကေိုလညျး ခုလို ပွောကွား ထားပါသေးတယျ ။ ” ကနြျော ကိုဗဈ positive ဖွဈတယျ ဆိုတာ သိသိခငျြး home quarantine ဝငျကွတယျ၊ ၁၀ ရကျပွညျ့တဲ့ နမှေ့ာ ကိုဗဈ ပွနျစဈတယျ positive ပဲ ပွနျပွတယျ။ အဲ့နောကျ ၄ ရကျ ထကျစောငျ့လိုကျတယျ၊ ပွနျစဈတယျ ဒီနပေ့ေါ့ ၁၄ ရကျပွညျ့တဲ့ နမှေ့ာ ဘုရားရှငျ ကြေးဇူးတျောကွောငျ့ ခုက Negative ဖွဈသှားပါပွီ။ Negative ပွပွီးဆိုပမေယျ့ (home quarantine) ၇ရကျတော့ နရေအုံးမယျ၊ အဲ့ပွီးတဲ့ခါ ကရြငျ‌တော့ အမဆေီ့မှာ အိမျပွနျလို့ရပါပွီ။” ဆိုပွီး ပွောကွားထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
Photo – Chin World & Benjamin Sum
ပရိသတ်ကြီး ရေ Myanmar Idol season (4) ရဲ့ Top (3) finalists တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ချင်း တိုင်းရင်းသားလေး အဆိုတော် ဘင်ဂျမင် ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူက ငယ်ရွယ် တဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် အနုပညာ အရည် အချင်း ပြည့်ဝ တဲ့ သူဖြစ်တဲ့ အတွက် ပရိသတ်အများစု ရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ရရှိ ထားတဲ့ သူတစ် ယောက်ပါ။
ဘင်ဂျမင် က အခု လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေ မှာ လည်း လူငယ် တစ်ယောက် ပီပီ ပါဝင် အားဖြည့်နေ တဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပြီး စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေ အတွက် တတ်နိုင်သရွေ့ ကူညီပေးနေတဲ့ သူပါ။ မကြာခင်က ဘင်ဂျမင် ဟာ ကိုဗစ် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံ ခဲ့ရပြီး ဆေး ကုသမှု ခံယူခဲ့တာ လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက် ခံရပြီး (၁၄) ရက်မြောက် နေ့မှာတော့ ရောဂါရှိ မရှိပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ရာ negative ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ကိုဗစ် ရောဂါ ကုသနေစဉ် ကာလ တစ်လျှောက် သူရဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေကိုလည်း ခုလို ပြောကြား ထားပါသေးတယ် ။ ” ကျနော် ကိုဗစ် positive ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိသိချင်း home quarantine ဝင်ကြတယ်၊ ၁၀ ရက်ပြည့်တဲ့ နေ့မှာ ကိုဗစ် ပြန်စစ်တယ် positive ပဲ ပြန်ပြတယ်။ အဲ့နောက် ၄ ရက် ထက်စောင့်လိုက်တယ်၊ ပြန်စစ်တယ် ဒီနေ့ပေါ့ ၁၄ ရက်ပြည့်တဲ့ နေ့မှာ ဘုရားရှင် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ခုက Negative ဖြစ်သွားပါပြီ။ Negative ပြပြီးဆိုပေမယ့် (home quarantine) ၇ရက်တော့ နေရအုံးမယ်၊ အဲ့ပြီးတဲ့ခါ ကျရင်‌တော့ အမေ့ဆီမှာ အိမ်ပြန်လို့ရပါပြီ။” ဆိုပြီး ပြောကြားထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
စားနပ်ရိက္ခာများကို တောတောင်ထဲမှာ ခက်ခက်ခဲခဲသယ်ယူနေရတာတွေကို ပရိတ်သတ်တွေကိုသိစေဖို့ ချပြလာတဲ့ နိုဗန်ထူး ရဲ့ ဗီဒီယို….
နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ခရစ္စတီနားခီတို့ မိသားစုအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်း….
ကင်ဆာရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ တက်သစ်စအဆိုတော် ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် နော်မာသထူးဝါး ရဲ့မိခင်ကြီး